Ngenxa ukuyikhokhela zalo ngokuvamile ugcwale nokungcebeleka. Nizhny Tagil (ukuphumula kulezi zindawo Liyindawo ezithakazelisayo) kokukhetha zonke labo bakhangwa iholidi baye nemvelo, kude impucuko futhi umsindo wedolobha. Ngaphandle komuzi futhi imingcele yayo, ikakhulukazi lapho kukhona ihlathi, elibamba izakhiwo ezahlukene. Ezinye izikhungo banezeluleko omkhulu amasevisi, kuhlanganise nokudoba, Ukushushuluza, yesikebhe. Ngezinye isifiso ekhethekile, ungaya sauna, iya ku ukushaywa noma iya ku-uhambo endaweni. Kukhona ukuzilibazisa isikhungo izobeka izivakashi zayo ibe amakamelo ethokomele futhi zikhululekile. On indawo yabo kukhona amathilomu, izindawo zokudla, amahholo, amachibi okubhukuda.
Njengezinye ukuzilibazisa eziningi (Nizhniy Tagil), "Ros ehlathini" - yindawo lapho wonke ingaphakathi yakhelwe isitayela yendabuko Russian. Zonke izindlu futhi ifenisha ezenziwe larch noma i-oak. Isibhakabhaka ngasesinqeni kakhulu, endaweni ehlanzekile lapha, okuyinto eyenza umuntu buya ngamunye amaholide abo.
Uma izivakashi uthanda yokuphila asebenzayo, banganikeza izindlela ukugibela intaba noma nokuhamba ogwadule. izinkonzo ezinjalo inikeze ezinye ukuzijabulisa. Nizhny Tagil (iholidi lapha eyoshiya wonke umuntu ukuvela okuningi) ihlangana njalo ngonyaka inani elikhulu lezivakashi. Izingane zingayithola i-ukhuphuka esikhundleni Izihlahla ezingaphephile iziqongo entabeni. Izivakashi eliqinisekisiwe sipho Rafting emfuleni noma umane go yesikebhe. Ukuqashiswa zivunyelwe ukuba zithathe ski noma snowmobile, uma izimenywa zingena ubusika. Thenga nawe ungadla cafe noma restaurant.
Vele amakhilomitha ambalwa ukusuka maphakathi nalesi sigodi elalihlala isikhungo ukuzijabulisa. Nizhny Tagil, iholide okuyinto elibamba abathandi bemvelo acwebile, izivakashi eziningi kuya izakhiwo zendawo. "Chauzhinka" kuyinto km 30 kuphela ukusuka edolobheni. It elibamba isizini ikhalenda ngayinye. nezakhamuzi zesikhashana behlaliswe sihlale, okuyinto zenzelwe abantu 8-20. Kuleso simo, uma izivakashi isikhwama inombolo ezanele imali "extra", angakuqeda lonke igumbi ngesikhathi esisodwa.
Umuzi ngamunye has zonke Izinsiza azosiza ubani ukuba uchithe amaholidi njengoba ethokomele. Isimiso esifanayo usebenzela nezinye nokungcebeleka (Nizhny Tagil). Phumula omenyiwe inhlangano epikinikini. Kulokhu, ungakwazi ukuqasha izoso futhi uhlale Gazebo. Ebusika, ekuphathweni inikeza igumbi ekhethekile, lapho wachitha ukudla.
Izindleko ubuncane endlini - ayizinkulungwane 4 ruble .. Le ntengo kungase kubonakale Nokho, abanye, wonke amasevisi inkulu kakhulu futhi ingaphakathi zakudala bathethelele ngokugcwele lesi sibalo.
Nezokungcebeleka isikhungo "Chaika" (Nizhny Tagil) itholakala eduze komuzi. indawo yaso amaningi izindawo eliyingqayizivele futhi emangalisayo sokuzilibazisa. Kukhona ikhefi, esebenza omningi ukudla neziphuzo. Kukhona amahholo amabili idili. Ngamunye esifanelana abantu 50. Ehlobo, izivakashi yokulala izindlu ekhethekile ebusika ukunikeza ongakhetha Warm.
The best ebhishi e Rostov-on-Don
Siyakwamukela ku-Dolphinarium. Utrish ulinde wena!
Isikimu ukuhlaziywa sifundo. ISIBONELO sifundo ukuhlaziywa (GEF)